25 Sano Ee Soo Socota, Saadaashayda | Martech Zone
25 Sano ee Soo socota, Saadaasheyda
Khamiista, Noofembar 16, 2006 Jimco, Diisambar 12, 2014 Douglas Karr
Kormeerayaasha kumbuyuutarku waxay noqon doonaan kuwo jajaban, iftiin leh, ballaadhan oo aan qaali ahayn. Si aad u ballaaran oo laga sameeyay balaastikyada, hababka wax soo saarku way ka jaban yihiin kana jaban yihiin.
Wadajirka taleefanka, telefishanka, iyo xisaabinta ayaa inta badan la dhameystiri doonaa.
Gawaarida iyo diyaaraduhu wali waxay ku shaqeyn doonaan gaas.
Kombiyuutarka kombiyuutarka ayaa inta badan la tagi doonaa, laguna beddelayaa Software ahaan Adeeg ahaan. Kumbuyuutarradu waxay si fudud u yeelan doonaan daalacashada iyo barnaamijyada yar-yar ee internet-ka ee karti u leh internet-ka oo leh kayd weyn.
Wireless ayaa laga heli karaa meel kasta, oo leh xalal isku dhafan… wax ku adeegashada wireless-ka, daawashada dhacdo isboorti oo wireless ah, iwm.
Naqshadaynta arjiga ayaa ka beddeli doonta barnaamijyada barnaamijyada loo adeegsado adeegsadaha iyaga oo adeegsanaya isdhexgalka isticmaalaha
GPS wuxuu joogi doonaa meel kasta, iyo nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed ayaa loo isticmaali doonaa si loola socdo annaga, carruurteenna, taleefannadeenna, baabuurkeenna, iwm.
Qalabka guryaha ayaa diyaar u noqon doona internetka, iyadoo la adeegsanayo kontoroollo fudud oo codsi ah oo laga heli karo shabakadda.
Nidaamyada digniinta iyo kamaraduhu dhammaantood waxay noqon doonaan kuwo internetka diyaar u ah oo aan xadhig lahayn, taasoo macaamiisha iyo shaqaalaha gurmadka u oggolaanaya inay meel fog ka xiriiraan oo ay ka hubiyaan arrimaha.
Nidaamyada aqoonsiga aqoonsiga ayaa ka gudbi doona faraha, wajiyada, iyo kubbadaha indhaha - waxayna dhab ahaan u adeegsan doonaan dhaqdhaqaaqa si ay u horumariyaan astaamo iyo isboorti.
Kumbuyuutarradu ma lahaan doonaan qaybo la dhaqaajin karo oo loogu talagalay xusuusta (ma lahaan karaan gawaarida wareega, diskiyada, CD-yada, ama DVD-yada)
Muusikiistayaasha iyo muusikadooda waxaa qandaraas siinaya shirkado, oo la xiriira muusigga noocyada. Muusikada waxaa loo qaybin doonaa lacag la'aan.
Aaladaha tarjumaada shaqsiga ah iyo turjumaadaha dhabta ah ee turjumaada dhijitaalka ah ayaa loo heli doonaa shirarka ama shirarka fiidiyaha, iyagoo ka dhigaya luqad iyo lahjad aan khusayn.
Lacagta ayaa inta badan ka maqnaan doonta nolol maalmeedkeena, taa badalkeed waxaan adeegsan doonaa lacagta elektarooniga ah.
Qalabyada qalliinka ayaa la ogaan doonaa kuwaas oo maareynaya unugyada iyada oo aan jidh ahaan la taaban.
Dowladaha dulmiga lihi way sii dhici doonaan sababo la xiriira internetka iyo dhaqaalaha adduunka.
Farqiga u dhexeeya hantida iyo saboolnimada ayaa hoos u dhacaya laakiin gaajada iyo nafaqo-xumada ayaa sii kordheysa.
Diimaha ayaa inta badan fashilmi doona waxayna noqon doonaan nidaamyo taageero ruuxi ah oo bulshada ku saleysan.
Internetku wuxuu u xuubsiiban doonaa lakabyo kala duwan, ganacsi, gaar loo leeyahay, amni, iwm oo ka madax bannaan midba midka kale.
Domain Names will become largely irrelevant as language recognition search and content recognition becomes prominent. Most people won't even utilize dot com's mar dambe.
Horumariyayaashu waxay u xuubsiiban doonaan iskudhafmeerayaasha kuwaas oo u xuubsiiban doona Logicians maadaama luqadaha kumbuyuutarradu noqdaan kuwo mugdi ku jiro oo xalka hal-abuurka ah iyadoo la adeegsanayo aalado badan ay aad muhiim u yihiin.
Wareegyada wareegga ayaa dhif noqon doona - nidaamyo koronto ku shaqeeya oo hooseeya oo leh wareegyo isku dhafan oo isku dhafan ayaa noqon doona mid caan ah. Ma jiro alxan, fiilooyin ma leh, kuleyl ma jiro… sida Legos oo kale.
Khariidaynta fikradaha iyada oo la adeegsanayo koronto iyo kiimiko kicitaan ayaa ka dhigi doonta galitaankeeda daawo. Wax ka qabashada kiimikooyinkaas iyo kicinta korantada ayaa soo socota. Kiniiniyadu sida caadiga ma noqon doonaan maxaa yeelay daawada oo dhami waxay yeelan doontaa qaabab looga qaado gudaha iyada oo aan lahayn xanuun, cirbad, iyo dheef-shiid la'aan.
Dawadu waxay daweyn doontaa buurnida.
Runtii ma waxaad moodeysay inaan dhahayo Nabadda Adduunka? Nope.
Tags: mustaqbalkasaadaalinta mustaqbalkaSaadaalintasaadaasha tikniyoolajiyadda
Dhammaan alaabooyinka waa Wadahadal
Nov 17, 2006 at 12: 21 AM
Oooh… ku dheji MP3 taleefoon! Waxaan hilmaamay sida AMAZING u ah ikhtiraac OO AH [sarc].
Nov 17, 2006 at 12: 07 AM
Nafaqo darrada? Saboolnimada? Aaway Apple iPhone
27, 2008 at 8: 26 AM
Waxaan u fadhiisanayaa # 25 kaliya.